Gafere ndị na - egbochi ya: Otu ị ga - esi hụ mgbasa ozi gị, pịa ya, ma rụ ọrụ ya | Martech Zone
N'ebe ahia ahia taa, enwere uzo mgbasa ozi karia ka o dikwa. N’ebe dị mma, nke ahụ pụtara ohere iji zie ozi gị. N’akụkụ dị ala, enwere asọmpi karịa oge ọ bụla iji dọta uche ndị na-ege ntị.
Mmụbawanye nke mgbasa ozi pụtara mgbasa ozi karịa, na mgbasa ozi ndị ahụ na-abanyekwu. Ọ bụghị naanị mbipụta mgbasa ozi, mgbasa ozi TV ma ọ bụ nke redio. Ọ bụ mgbasa ozi gbasaa mgbasa ozi zuru oke n'ịntanetị na-eme ka ịchọta "X" na-enweghị ike iwepu ha, vidiyo vidiyo na-akpaghị aka ga-atachi obi tupu ị hụ ọdịnaya achọrọ, mgbasa ozi ọkọlọtọ na-egosi ebe niile, na mgbasa ozi na-esochi gị site na iweghachi site na kọmputa ruo na ekwentị mkpanaaka na azụ ọzọ.
Ike agwụla ndị mmadụ maka mgbasa ozi na mgbasa ozi niile. Site na nyocha HubSpot, ọtụtụ mmadụ na-ahụ ọtụtụ mgbasa ozi na-asọ oyi ma ọ bụ na-eme mkparị, enweghị ọrụ, ma ọ bụ mkparị. Ihe kpughere ndị mgbasa ozi bụ na ụdị mgbasa ozi ndị a na-enye ndị na-ekiri echiche na-adịghị mma banyere ọ bụghị naanị weebụsaịtị ha na-eduga kamakwa ụdị ndị ha na-anọchi anya ya. Yabụ na azụmaahịa azụmaahịa gị nwere ike ịnwe mmetụta dị iche n'ahụ ndị mmadụ karịa ka ịchọrọ; o nwere ike ibute echiche adịghị mma nke akara gị na ndị mmadụ, ọ bụghị nke dị mma.
Mgbasa ozi ndị ọzọ, nkụda mmụọ ọzọ: Tinye ndị na-akpọ Ad
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ndị mmadụ achọtala ụzọ maka nkụda mmụọ nke mgbasa ozi mgbasa ozi taa: ndọtị mgbasa ozi. Dabere na akụkọ na-adịbeghị anya site na PageFair & Adobe, 198 nde ndị na-eji Intanet eme ihe na-eji mgbasa ozi mgbasa ozi igbochi ugbo ala dijitalụ na-abata dị ka ọkọlọtọ, mmapụta na mgbasa ozi ntanetị na ịpụta na weebụsaịtị na mgbasa ozi kachasị amasị ha, yana iji mgbasa ozi mgbasa ozi etoola site karịa 30% karịa afọ gara aga. Mgbachi mgbasa ozi na - emetụta ebe ọ bụla site na 15% - 50% nke okporo ụzọ ndị na - ebipụta weebụsaịtị, ọ kachasịkarị na saịtị ịgba egwu, ebe ndị na - ege ntị na - eji teknụzụ ma nwee ike itinye teknụzụ mgbasa ozi.
Ya mere, gịnị ka onye mgbasa ozi na-eme?
Ndị mgbasa ozi na-achọ “ịgafe ndị na - egbochi mgbasa ozi” nwere ike iju ya anya ịmata na e nwere onye na-ajụ ase ga-enyere ha aka ịgabiga nsogbu mgbasa ozi ahụ, ọ bụghị usoro mgbasa ozi mmekọrịta nke oge. Ọ bụ email. Tụlee nke a: ngwa a na-ejikarị na todayntanetị eme ihe taa abụghị Facebook ma ọ bụ Twitter. Ha bụ, n’ezie, Apple Mail na Gmail.
Email bụ ebe nku anya dị, ọ naghị apụ, dị ka ụfọdụ chere. N'ezie, email siri ike karịa mgbe ọ bụla; ọtụtụ ụdị na-eme atụmatụ izipu ozi email ọzọ na afọ a ma gaa n'ihu na mmụba ahụ. Email marketing na-etu ọnụ nke ROI nke 3800% ma na-eme mgbanwe karịa ọwa ọ bụla. Ozi mgbasa ozi nwere ike ịhụ karịa ugboro ise na email karịa ka ha dị na Facebook, ma email dị 40 ugboro karịa maka inweta ndị ahịa ọhụrụ karịa Facebook ma ọ bụ Twitter. Na mkpokọta, nke ahụ nwere ikike dị ike dị egwu.
Gịnị kpatara ọnụọgụ dị elu nke ịlaghachi site na email? Dị nnọọ mfe, ọ bụ otu ebe ụdị nwere njikọ siri ike, njikọ kpọmkwem na onye ọrụ njedebe - njikọ nke na-adịgide ma ọ dabere na ihe nchọgharị, ngwaọrụ ma ọ bụ nyocha ọchụchọ. Ndị mmadụ na-echekwa adreesị ozi-e ha ogologo oge; o yikarịrị ka ha ga-agbanwe adreesị anụ ahụ ha mgbe ahụ ha ga-agbanwe adreesị ozi-e ha.
Na nwute, maka uru niile email na-eweta, na-ezere igbochi mgbasa ozi site na izipu ozi ịntanetị anaghị egbutu ya; O siri ike ịkpọsa iji nyiwe dịka Apple mail ma ọ bụ Gmail ozugbo. Yabụ kedu ka ị ga - esi jiri ike nke email na ike niile ọ na - enye?
Seta Anya Anya Dị Mma na Akwụkwọ Akụkọ Email
Otu ụzọ bụ site na itinye mgbasa ozi na akwụkwọ ozi email nke ndị nkwusa nyefere bụ ndị na-ezipụlarị ha ka ha soro, ndị họọrọ. Ndị nkwusa nke akwụkwọ akụkọ email na-achọ ụzọ ha ga-esi na-azụ ụgbọ ala ha ugbu a, wee bulie mkpụrụ ha elu, ma, n'ọtụtụ oge, ha na-anabata ntinye mgbasa ozi dịka ụzọ isi mee nke ahụ.
Maka ndị mgbasa ozi, nke a pụtara na ị nwere ike itinye mgbasa ozi ezubere iche siri ike, nyefere ike na ndị ahịa dị ugbu a na mgbasa ozi email na-ele anya, na-agagharị na ndị na-egbochi mgbasa ozi iji ruo ndị na-ege ntị. Kachasị mma, ndị a na-emeghe ihe ọhụụ ịhụ ụfọdụ ọdịnaya egosipụtaralarị mmasị na ha. Ndị debanyere aha na akwụkwọ akụkọ ahọrọla ịnata ozi ahịa site n'aka ndị nkwusa; ha tụkwasịrị obi ma jiri ọdịnaya onye nkwusa ahụ kpọrọ ihe. Tụkwasị mgbasa ozi gị na gburugburu ebe a na-enyere gị aka ịkwado ntụkwasị obi na nlebara anya ahụ. Ikwesiri ime ka mgbasa ozi gị dị mkpa, na-ezi ozi, ma nwee ike ịbanye na mmasị ndị na-agụ ya site na ịhazi onwe gị.
Mepụta mgbasa ozi gị bụ ihe dị mfe ebe ọ bụ na ị maraworị ihe niile banyere onye na-agụ ya site na ichebe akwụkwọ akụkọ ahụ. Dakọtara ọdịnaya mgbasa ozi gị na nke onye a masịrị, ihe na-adịghị amasị ya, ụdị mmadụ na mkpa ya, ị ga-ewulite ntụkwasị obi na iguzosi ike n'ihe, ma bulie ọnụọgụ pịa.
Nwee Mmetụta zuru ezu maka ịpị ihe.
Akụkụ bụ isi nke ahaziri mmadụ gụnyere ịkọ akụkọ. Adịla naanị ịkpọsa ngwa ahịa ụlọ ọhụrụ - soro onye na - agụ ya kọwaa ụzọ ise ngwaahịa a ga - esi mee ka ndụ ha dị mfe. Ekwela kpọsaa ọrụ ọhụụ nke ga - echekwa oge na nchekasị - tụlee ụzọ ha ga - esi jiri oge ọhụụ mee ihe ha hụrụ n'anya.
Typesdị akụkọ ndị a ahaziri iche ga-eduga ndị na-agụ akwụkwọ na peeji nke ọdịda gị, ebe ị nwere ike iwepụ azịza maka nsogbu ha: ngwaahịa gị. N'oge ahụ, onye ọrụ ahụ nwere mmasị ma nwee mmasị, ma yikarịrị ka ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Akụkụ kachasị mma - ọ dị mfe.
Enwere ngwọta dị taa nke na-agbanwe usoro mgbasa ozi email a niile. Ihe ngwọta ndị a nwere ike ịmekọrịta gị na ezigbo netwọkụ nke ndị na - ebi akwụkwọ akụkọ nwere ndị na - ege ntị ziri ezi, ma nyere gị aka ịzụlite ezubere iche, ọdịnaya dị mkpa ga - eme ka ndị na - ege ntị na - emekọrịta nke ọma na akara gị.
Site na ele ihe ọhụrụ na email, atụmatụ mgbasa ozi ziri ezi, yana onye ọlụlụ email tozuru oke, ị nwere ike gafere ndị na-egbochi gị - ma were ike nke ezigbo ozi ịntanetị mgbasa ozi nwere inye.